Umanyolo Isityumzi Factory | China Umanyolo Isityumzi Abavelisi, Abaxhasi
Inkqubo ye- Umatshini wokuchumisa umatshini weCage Mill ukuba ziyilelwe kwaye isetyenziswe ngokubanzi kwizimbiwa eziphilayo, ikomityi isichumiso yokutyunyuzwa, edityanisiweyo isichumisi yamasuntswana yokutyunyuzwa. Ingazityumza zonke iintlobo zezichumisi zekhemikhali ezinomxholo wamanzi ongaphantsi kwe-6%, ngakumbi kwizinto ezinobunzima obuphezulu.
Inkqubo ye- Ngeendiza & Wood isityumzi luhlobo olutsha lwemveliso yezixhobo ezenziwe ngomgubo ngomthi, inokwenza umququ, iinkuni kunye nezinye izinto ezingasetyenziswanga kanye xa zigqityiwe ukwenziwa iichips zeenkuni, kutyalo-mali oluncinci, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, imveliso ephezulu, izibonelelo ezilungileyo zoqoqosho, kulula ukusebenzisa ulondolozo.
Inkqubo ye- Nkqo Chain isichumiso isityumzi sesinye sezixhobo esiqhelekileyo kushishino lwesichumisi esimbaxa. Umatshini wamkela amandla aphakamileyo kunye nokunxiba i-carbide chain kunye nesantya esijikelezayo esihambelanayo, esifanelekile ukutyumza izinto ezingavuthiyo kunye nezinto zokubuyisa.
Inkqubo ye- Amabini-Stage isichumiso isityumzi Machine ekwabizwa ngokuba akukho-yokugalela ezantsi isityumzi okanye umatshini kabini otyumkileyo, yahlulwe ngokwamanqanaba amabini yokutyunyuzwa. Sisixhobo esifanelekileyo sokutyunyuzwa esamkelwa kakuhle ngabasebenzisi bentsimbi, isamente, izinto ezitsalayo, amalahle, ishishini lobunjineli bokwakha kunye namanye amacandelo.